#ash Recent Posts - HiveLIST
ထမင်းတနပ် youtube ဗီဒီယိုများပေါ်တွင် ယခုတလော မြင်တွေ့နေရသည်မှာ ၅၀၀ ကျပ်တန် ဇလုံထမင်းဆိုင် ဖြစ်သည်။ ထိုထမင်းဆိုင်မှာ ကျယ်ဝန်းသောခြံထဲရှိ အမိုးမြင့် သံဖရိမ်မဏ္ဍပ်အောက်တွင် စားသောက်ခုံများဖြင့် တည်ခင်းရောင်းချ
Lion statues at the entrance ofamonastery Lion statues are usually erected at the entrance of pagodas and monasteries in Myanmar. Other statues like dragons, garudas, ogres, etc. can be seen near and around pagodas.
Shwezigon Pagoda is located in Bagan where an ancient city, 9th - 13th ... Shwezigon Pagoda is located in Bagan where an ancient city, 9th - 13th centuries,aUNESCO World Heritage Site in Myanmar. ( တန်ခိုးမှာရွှေစည်းခုံ ) #hive-193084…
Cassava cake (Burmese snack) This is the first post in ASEAN HIVE COMMUNITY. I am from Myanmar (Burma). My name can be called Mr.Lu. It isagreat pleasure to meet ASEAN friends. Today I would like to…
How I fight procrastination source I tend to procrastinate and sometimes I don't even realize that I am procrastinating. There could be many reasons for p
အနှစ် ၃၀ သံသရာ vicious circle ဤစာစုတွင် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သမိုင်းဆိုင်ရာများ ပါဝင်နေ၍ စာလေးမည်ကို စိုးရိမ်သော်လည်း နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲနှင့် ခုနှစ်သက္ကရာဇ်များ၏ ကလင်ဒါကျ တိုက်ဆိုင်မှုများကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့သေ
Manuha Temple isaBuddhist temple built in old Bagan, by captive Mon ... Manuha Temple isaBuddhist temple built in old Bagan, by captive Mon King Manuha in 1067 #hive-193084 #creativecoin #palnet #neoxian #archon #ash #proofofbrain…